Sport ဆန်ဆန် အသွင်သစ် တစ်ခုကို ရရှိလာခဲ့ပြန်တဲ့ 2022 Kia Niro ! – MyMedia Myanmar
Sport ဆန်ဆန် အသွင်သစ် တစ်ခုကို ရရှိလာခဲ့ပြန်တဲ့ 2022 Kia Niro !
၂၀၂၁ ခုနှစ် အစပိုင်း မှာတော့ Kia အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး ကားအမျိုးအစားတွေနဲ့ ပက်သက်လို့ အချက်အလက် တစ်ချို့ကို အကြိုချပြခဲ့ပြီး Dedicated Platform အသစ် ကိုလည်း အသုံး ပြုသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုထား ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလို အခြေအနေ က Kia ဟာ လက်ရှိ ရှိပြီးသား Model Lineup တွေကို လုံးဝပစ်ပယ် သွားမယ့် အနေအထားတစ်ရပ် တော့ မဟုတ်ပြန် ပါဘူး။ Brand ကိုအခုထက် ပိုမိုချဲ့ထွင်မယ့် အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်အနေနဲ့ Kia ရဲ့ Models အသစ် တွေ မှာ ပိုမိုထူးခြားလှပတဲ့ ဒီဇိုင်းပိုင်းတွေကို မြင်တွေ့ လာရနိုင်တယ် ဆိုတာကိုတော့ အခုထိ ဖော်ထုတ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ Concept တစ်ချို့က သက်သေပြလျက် ရှိနေပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ပြောရ မယ် ဆိုရင် မျိုးဆက်သစ် ကားအသစ်တစ်စီး ဖြစ်တဲ့ Kia Niro ဟာ ဆိုရင် HabaNiro Concept အပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ဒီဇိုင်းဆွဲထားတာ ဖြစ်ကာ အဆိုပါ Concept ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် တုန်းက စတင် ပြသခဲ့ ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ လပိုင်းတုန်းကပဲ အဆိုပါ ကား အသစ်ရဲ့ ပုံရိပ်တစ်ချို့ကို Camouflage တွေ ဖုံးအုပ်လျက် မြင်‌တွေ့ခဲ့ရပြီး အခုဆိုရင်လည်းအေးမြတဲ့ ဆောင်းရာသီမှာ အစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ ဒဏ်ခံ နိုင်မှု စမ်းသပ်နေတဲ့ အနေအထားကိုလည်း ထပ်မံ မြင်တွေ့ခဲ့ရပြန်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အခု အဆင့် ကတော့ အစောဆုံး အဆင့်တစ်ရပ်မှာပဲ ရှိသေးတာကြောင့် ကားကို Camouflage တွေ အပြည့်အဝ ဖုံးအုပ် ကာကွယ်ထားဆဲ ဖြစ်ကာ အချို့သော ဒီဇိုင်းတွေကတော့ မြင်တွေ့ရတဲ့ အနေအထားအရ Concept တုန်းက ပုံစံနဲ့ ဆင်တူနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လည်း ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းတာ ကတော့ တကယ်ကို ထူးခြားကောင်းမွန်ပြီး လှပတဲ့ Butterfly Doors တွေကိုတော့ ထည့်သွင်း လာခြင်း မရှိတော့ပေမယ့် ပိုတိုတဲ့ Overhang တွေ ပိုရှည်တဲ့ Wheelbase တွေနဲ့အတူ ခရီးသည်အတွင်းခန်း နေရာအတွက်ကိုလည်း ပိုပြီးကျယ်ဝန်း အောင် ဖန်တီးပေး ထားနိုင်တာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Boomerang ပုံစံ Taillights တွေ ကိုလည်း ထည့်သွင်း ပေးထားမှာ ဖြစ်ပြီး Niro အမျိုးအစားကို ယခင်မျိုးဆက် အဟောင်းထက် စာရင်ပိုပြီး Sport ဆန်ဆန် ပုံစံမျိုး ရှိလာအောင် ဖန်တီး ပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန် မဟုတ်တဲ့ တစ်ချက်ကတော့ HabaNiro ဟာ ဆိုရင် Brand ရဲ့ အမှတ်သညာ တစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့ Tiger-Nose Grille ကို ဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့ Kia ရဲ့ ပထမဆုံး Model တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သလို အဆိုပါ Grille နေရာမှာတော့ အရှေ့ဘက်က Shark Snout ပုံစံ အဆုံးသတ်နဲ့ အစားထိုး ထားတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ဒီဇိုင်းကိုတော့ ဆက်လက် အသုံးပြုသွားဖို့ များနေပေမယ့် Camouflage ပမာဏ အများအပြား ဖုံးအုပ်ထားဆဲ အနေအထား တစ်ရပ် ကြောင့်တော့ ကားရဲ့ အရှေ့ဘက်အနားသတ်ကို တိတိကျကျ မြင်တွေ့ အတည်ပြုနိုင်ဖို့ အတွက် တော့ ခဲယဉ်း နေပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် ကားရဲ့ Headlights တွေ ကလည်း ယာယီ တပ်ဆင် ထားဆဲ အသွင် ကိုပဲ မြင်တွေ့ ရပါ သေးတယ်။ သေချာတာကတော့ အဖုံး အကာတွေ ဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင် Kia Niro အသစ်ဟာ တံခါး ၅ ပေါက်ပါ ဒီဇိုင်း အတော်လေး ကောင်းမွန်တဲ့ Compact SUV ကားကောင်း တစ်စီး ဖြစ်လာနိုင်ဖို့အတွက် မျှော်လင့် ရတာဖြစ်ပါ တယ်။
အခု လက်ရှိ မော်ဒယ် လိုပဲ မျိုးဆက်သစ် Niro မှာလည်း Combustion Engine အမျိုးအစား အပြင် Plug-In Hybrid နဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် သီးသန့်သုံး အမျိုးအစား တွေကိုလည်း ထည့်သွင်း ပေးထား လာနိုင်ကာ Kia ရဲ့ လျှပ်စစ် ကားကဏ္ဍသစ်အတွက် တွန်းအားတစ်ရပ် အနေနဲ့ လည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ လာမယ့် ၂၀၂၇ ခုနှစ် အရောက်မှာ တော့ Kia ဟာ သူတို့ရဲ့ လျှပ်စစ်ကား အမျိုးအစားသစ် ၇ မျိုး အထိကို ထုတ် လုပ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပေမယ့် အခုထုတ်လုပ်မယ့် Kia Niro အသစ်ကတော့ အဆိုပါ လျှပ်စစ်ကားတွေထဲက တစ်စီး ဖြစ်လာမလားဆိုတာကို တော့ အတည် မပြုနိုင်သေးပါဘူး။ အဆိုပါ လျှပ်စစ် ကားအသစ်တွေကတော့ Hyundai ရဲ့ Dedicated Electric Global Modular Platform အသစ်တွေကို အသုံး ပြုတည်ဆောက်သွားဖို့ ရှိနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခု Kia Niro အသစ် ကိုတော့ အခုနှစ် အတွင်း မှာပဲ ပွဲထွက် လာဖို့ မျှော်လင့် ရပြီး အရောင်းပိုင်းမှာတော့ 2022 Model Year အတွက် ဆိုပြီး ရောင်းချ လာနိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
The post Sport ဆန်ဆန် အသွင်သစ် တစ်ခုကို ရရှိလာခဲ့ပြန်တဲ့ 2022 Kia Niro ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-27T14:31:02+06:30January 27th, 2021|MYCARS MYANMAR|